Jaaliyadda Jubbooyinka Ee Australia Oo Soo Dhaweeyey Maamul U Samanynta Jubbooyinka • Horseed Media
You are here: Home / Communities / Jaaliyadda Jubbooyinka Ee Australia Oo Soo Dhaweeyey Maamul U Samanynta Jubbooyinka
Shicibka Jubbooyinka ee ku dhaqan Australia oo soo dhoweeyey maamul u samaynta Jubbooyinka isla markaana eedeeyey Madaxweynaha Soomaaliya
Maalintii Axada ee bisha Nufeembar ahayd 11ka waxaa isugu yimid Xarunta bulshada ee North Melbourne Jaalliyada Soomalida ku nool magaalada Melbourne oo asalkoodu ka soo jeedaan gobolada Jubbooyinka. Dadkaas kulankoodu wuxuu ku salaysnaa saddex qodob oo kala ah:
* U mahadcelinta ciidamadii ka koobnaa Ciidamada Dawlada, Ciidamada Raaskaanbooni iyo ciidamada Kenya kuwaas oo naftooda u huray ka xoraynta goboladaas nimankii argagixisada ahaa ee Al-shabaab. Waxay dadweynuhu si gaara ugu mahadceliyeen Kenya oo si gaara isugu xilqaantay ka mira dhalinta arrintaan. Kenya waxtarkeeda Soomaalida kuma ekayn mawduucaan keliya balse Kenya waxay ahayd guriga keliya ee dadka Soomaalida ahi yeesheen dagaalkii sokeeye ka dib, iyada oo weliba ay iyaga ka soo gaartay dhibaato amni, bulsho iyo mid dhaqaale.
* Soo dhowaynta maamul u samaynta goboladaas (Dawlad Goboleed) sida waafaqsan distuurka Soomaaliyeed qodobadiisa 1, 3, 48, iyo 50).
* Ugu dambayntiina waxay ugu baaqeen madaxweynaha inuu ka waantoobo colaada uu u muujiyey inuu u hayo ummadda ku dhaqan Jubbooyinka. Dadkii halkaas isugu yimid waxay ku nuuxnuuxsadeen in aanay sinaba ku dhici karin faragelin lagu sameeyo dhismaha dawlad goboleed ka hana qaaday Jubbooyinka iyo . Sidoo kale waxay soo hadal qaadeen inay nasiib daro tahay in madaxweynuhu muujiyo inuu weli ku jiro mugdii siyaasadeed ee la galay 1991kii kaas oo cawaaqib xumaddii ka dhalatay laga warqabo dhibta ay ummadda Soomaaliyeed u keentay. Waxaa aad loola yaabay, aadna looga argagaxay in madaxweynuhu u soo magacaabo guddi ay ku jiraan Goobaale iyo Indha Cadde, kuwaas oo dembiyo badan ka geestay goboladaas isla markaana ah shakhsiyaad ka aradan aqoon diimeed iyo mid cilmaaniya oo aan ka ahayn sidii loo qaadi lahaa dagaal ku salaysan qabiil.
Dad badan oo ka tirsanaa dadka isu yimid ayaa waxaa ku jiray kuwii soo dhoweeyey magacaabista madaxweynaha, una arkaayey in jiilkaan cusubi wax ka bedeli doono dhibaatada Soomaaliya ka jirta oo badankeed ka soo butaakacayso Muqdishu. Waa nasiib daro in dadkaasi hadda u muuqdaan inay ku hungoobeen waxay madaxweynaha ka filayeen. Waxaa la xusay in madaxweynuhu ugu baaqay dadka dega Hiiraan inay dawlad samaystaan una madaxbaan yihiin, halka uu isla khudbadiisa ku sheegay in Kismaayo isagu u dhisayo maamul, waxaa is weydiin mudan goormaa Kismaayo agoon noqotay? Waxaa iyana is weydiin mudan ciidamada sugaya nabadgelyada Xamar ee shisheeye iyo kuwa Kismaayo oo deriska ah maxay ku kala duwanaadeen, oo keenay in la dhibsado abaabulkoodii hore, xorayntii Kismaayo iyo maanta oo ay Kismaayo ka caawimayaan inay yeellato maamul dadkoodu doorteen? Madaxweynuhu ma hilmaamay in dawlada uu ku mina sheeganayo ay wax ka soo dhistay AMISOM, Kenyana AMISOM ka tirsan tahay?
Dadka hadalada kooban ka jeediyey fekerkooduna cabiray waxaa ka mid ah Xassan Yusuf Shuuriye, Cumar Cabdisamad,Moxamud Xujale, Xaashi Xirsi Dekayn, iyo Sahra Shiikh Mohamud, waxaana barnaamijka daadihinayey Fawsi shikh c/qaadir iyo Saciid Shiinle.
Waxaan illaahay ka rajaynaynaa inuu madaxweynaha tuso xaqa, dadka Jubbooyinkana wadada khayr ku hagaajiyo guulna gaarsiiyo.
Guddiga qabanqaabada Barnaamijka